Sida loo daawado Canal Plus oo ku nool xitaa dalka dibaddiisa - TELES RELAY
ACCUEIL » QODOBO • Featured • TECH & TELECOM Sida loo daawado Canal Plus ha noolaado xitaa dibadda
Sida loo daawado Canal Plus ayaa ku nool xitaa dibadda
X Email12 Reddit23 Stumbleupon32
Canal Plus waa telefishanka Faransiiska ee lacagta laga sii daayo oo laga bilaabay 1984. Tan iyo Bishii Nofembar 2017, Canal + waxay bilaabatay inay ku kala duwato buuggyaraha caalamiga ah iyada oo loo sii marayo Canal + feed feed. Canal + wuxuu leeyahay barnaamijyo u gaar ah, oo loogu magac daray MyCanal, kaas oo baahiya inta badan kanaallada Canal + iyo Canal Play, oo ay ku jiraan maktabad aad u weyn oo ah filimada Faransiiska, Mareykanka iyo Ingiriiska iyo taxanaha telefishanka. Labada barnaamijba way la jaan qaadayaan aaladaha badankood. Iyada oo daboolka laga qaadayo 1 League, Cannes Film Festival iyo Grand Journal, waa lama huraan dhammaan afafka faransiiska. Marka la soo koobo, Canal Plus waa xirmo madadaalo oo dhameystiran oo ay ku jiraan barnaamijyo ajnabi oo kala duwan iyo kuwa gudaha ah oo lagu qanco dhammaan noocyada daawadayaasha waqti kasta.
no shaki, Canal plus waa kanaal telefishan ka wanaagsan kan ay Faransa bixiso. Tani waa sababta ay u leedahay tiro badan oo daawadayaal ah oo ka baxsan Faransiiska. Deganeyaasha faransiiska waxay ka daawan karaan Canal Plus khadka tooska ah ee myCANAL iyo Canal Play. Si kastaba ha noqotee, maxaa dhacaya haddii qof ka baxsan Faransiiska uu doonayo inuu internetka ku baahiyo myCanal ama Canal Play? Sababo la xiriira xaddidaadaha gobolka, qurbe-joogga Faransiiska ee ku nool, wax u barta ama ka shaqeeya dibadda ayaa heli karin Canal + ka baxsan Faransiiska.
Nasiib wanaagse, xal ayaa jira. Waad furi kartaa Canal Play, myCanal iyo adeegyada kale ee Faransiiska geoblocked iyadoo la adeegsanayo adeegga ugu wanaagsan ee VPN.
Ka hor intaadan fahmin sida loo galo Canal + xitaa dibadda, waa inaad marka hore ogaataa sida xayiraadaha juquraafi ahaan ay u shaqeeyaan. Websaydhka 'canal' wuxuu adeegsadaa cinwaannada IP si uu uga duwanaado muwaadiniinta Faransiiska iyo waddamada kale. TheIP waa xarig gaar ah oo lambarro kala duwan ah oo loo qoondeeyey aalad kasta oo ku xiriirta internetka, una oggolaaneysa in xogta loo diro aaladda ku habboon.
Shabakad khaas ah oo gaar loo leeyahay (VPN) ayaa ku wareejisa dhammaan taraafikada internetkaaga iyada oo loo marayo shirkad ku taal waddanka aad doorato. Markaa, waxaad moodaa inaad joogi doonto Faransiiska haddii aad doorato server-ka Faransiiska. Sidaas darteed, waxaad heli doontaa dhammaan waxyaabaha kujira gobolkaan. Waxaa mahad leh PureVPN oo bixiya IP IP oo heeganka leh oo aad ku daawan kartaan waxyaabaha ka kooban Canal Plus ama barnaamijyada kale ee Faransiiska ee aad ka doorato dibadda.
Sida loo daawado Canal oo lagu daray
Waa tan a hage deg-deg ah si aad ula socoto toosinta tooska ah ee Canal ka baxsan France:
Kusoo Dhawow PureVPN
Ku soo dejiso VPN aaladaha aad ugu jeceshahay
Xulo server faransiis ah
Gaar marin durdurka tooska ah ee Kanaal
Rukunso oo ku raaxee socodka ugu wanaagsan
Ninkani wuxuu leeyahay laba dumar ah, wuxuu wadaagaa qarsoodiga noloshiisa guurkiisa farxada leh - CAALTH PLUS MAG
Hitman 2: farandole waxa uu ka kooban yahay bisha July